Ku biir TPCH - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
Haddii aad diyaar u tahay ka-hortagga iyo guri-la'aanta Tucson iyo dhammaan Degmada Pima, waanu kuu baahanahay! TPCH waa isbahaysi ku saleysan bulshada oo ah bixiyeyaasha adeegga aan macaash doonka ahayn, wakaaladaha dowladda, ururada caqiidada, ganacsiyada, iyo xubnaha bulshada ee ka wada shaqeynaya ka hortagga iyo joojinta hoy la'aanta ka jirta Tucson iyo dhammaan Gobolka Pima.
Xubinnimada TPCH waa u furan tahay dhammaan shakhsiyaadka iyo ururada ku nool ama ka shaqeeya degmada Pima County, Arizona oo wadaaga ballanqaadka TPCH ee ka hortagga iyo soo afjaridda hoy la'aanta gobolkayaga. Waxaannu tan u samaynnaa annagoo ka hadlayna arrimaha asaasiga ah ee gacan ka geysanaya hoy la'aanta, kobcinta iskaashiga qaybta iyo iskaashiga, iyo istiraatiijiyad ku waafajinta ilaha maxalliga ah ee saameynta wadajirka ah.
TPCH waxay isku dubaridaa barnaamijka HUD ee Daryeelka (CoC) ee Tucson iyo Pima County oo ay kujirto tartan sanadeedka loogu talagalay maalgalin lacageed ee federalka ee McKinney-Vento, waxay maareysaa Nidaamka Macluumaadka Maareynta Hoyga ee maxalliga ah (HMIS), waxayna maamushaa nidaamka Iskuxirka Xiriirinta Isuduwda ee gudaha oo ay dadka ku shaqeeyaan la kulanto ama halis ugu dhow oo ah inay la kulmaan hoyla'aan ayaa lagu qiimeeyaa laguna xiriiriyaa ilaha guryaha.
Xubnaha TPCH waxay door firfircoon ka ciyaaraan qaabeynta jawaabaheena bulshooyinka guri la'aanta. Marka lagu daro sameynta codkaaga, xubnaha TPCH waxay helaan:
Warar iyo casriyeynno ku saabsan siyaasadaha federaalka, gobolka, iyo maxalliga iyo dadaallada la xiriira guri-la'aanta iyo sababaha sababay
Tababar bilaash ah iyo qiimo dhimis iyo isdiiwaangalinta shirka
Fursado in lala xidhiidho oo wax laga barto asxaabta iyo hogaamiyayaasha nidaamka
Xulashada waraaqaha taageerada marka la gudbinayo dalabyada deeqaha ee la jaan qaada howlgalka TPCH iyo qiimayaasha (Xubnaha Ururka)
Aqoonsiga kaqeybgalka iskaashiga ee maalgaliyeyaasha maxalliga ah, gobolka, iyo federaalka (Xubnaha Ururka)
Gudbi codsigaaga xubinnimada
Ma jiraan wax lacag ah oo xubnaha cusub ayaa lagu soo dhaweynayaa inay ku soo biiraan waqti kasta. TPCH waxay siisaa ikhtiyaarrada xubinnimada shaqsiyaadka iyo ururada.
Codsiga Xubnaha Ururka
TPCH waxay soo dhaweynaysaa xubinnimada ka timaadda caqiidada, caqiidada, faa'iido-doonka, ganacsiga, daryeelka caafimaadka, waxbarashadda, shaqaalaha, iyo ururada kale ee iskaashatada ka shaqeeya. Hay'adaha la wadaaga ballanqaadka TPCH ee ka hortagga iyo joojinta hoy la'aanta ee Degmada Pima waxay u qalmaan inay codsadaan xubinnimada Ururka ee TPCH iyagoo:
Dhameystirka Codsiga Xubnaha Ururka, Iyo
U hoggaansanaanta TPCH Khilaafaadka Siyaasadda Danaha iyo Xeer Dhaqanka.
Xubnaha ururada waxaa looga baahanyahay:
Taageer hirgelinta Nidaamka Macluumaadka Maareynta Maareynta Daryeel la'aanta iyo Nidaamka Galitaanka Isku-dubbaridan sida lagu qeexay Axdiyada Maamulka TPCH
Ku tabaruc awooda shaqaalaha qorsheynta iyo hirgelinta Tirakoobka Muddada Sanadka ah ee Dadka la soo deristay hoy la’aanta ee Gobolka Pima
Haddii adeeg bixiye guryeyn, hirgeliyo Hoyga Koowaad mabaadi'da iyo dhaqamada ku saleysan caddaynta
Shuruuda kaqeybgalka dheeraadka ah ayaa quseysa wakaaladaha xubinta ka ah ee hela maalgelinta Barnaamijka Daryeelka Degdegga ah iyo / ama Gargaarka Degdegga ah waxaana lagu qeexay Axdiga TPCH Xukunka Maamulka, TPCH Heerarka Qoraalka ah, TPCH HMIS Nidaamyada iyo Nidaamyada Howlgalka, iyo TPCH Isku dubbaridyada Siyaasadaha Galitaanka iyo Nidaamyada iyo Nidaamyada Nidaamyada ayaa laga heli karaa https://tpch.net/about/tpch-governing-documents/.
Xuquuqaha Cod Bixinta
U-qalmitaanka u codeynta arrimaha la hor keenay Golaha Guud ee TPCH waxay ku saleysan tahay kaqeybgalka shirarka Golaha Guud ee TPCH. Xubnaha ka soo qayb galay laba ka mid ah saddexda kulan ee hore ee Golaha Guud ee TPCH waxay leeyihiin mudnaanta codbixinta inta lagu jiro kulan kasta ama codka elektarooniga ah ee Golaha Guud. U-qalmitaanka cod-bixinta waxaa dabagal ku sameeya Hay'adda Hoggaaminta ee CoC oo ay kormeeraan Guddiga CoC.
Xubnaha bulshada ee wadaaga ballanqaadka TPCH ee ka hortagga iyo joojinta hoy la'aanta ee Degmada Pima waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan xubinnimada Codbixinta Shakhsiga. TPCH waxay si adag u dhiirigelineysaa dadka ay soo mareen hoyla'aan ama deganaansho la'aan guryahooda inay ku biiraan.
Fiiro gaar ah: Shakhsiyaadka loo shaqeeyay ama si kale u matalaya Xubnaha Codbixinta Ururku uma qalmaan xubinimada Shakhsiga laakiin way ka qaybqaadan karaan dhammaan howlaha TPCH waxaana lagu dhiirigelinayaa inay iska diiwaangeliyaan ku dhawaaqida TPCH ee www.tpch.net/news.
Shaqsiyaadka u qalma waxay dhisi karaan xubinnimada TPCH iyagoo:
Dhameystirka Codsiga Xubinnimada, Iyo
U hoggaansanaanta Khilaafaadka Khilaafaadka TPCH iyo Xeerka Anshaxa.
Taariikhaha kullamada, waqtiyada iyo goobaha ayaa dhammaantood la heli karaa iyadoo la adeegsanayo jadwalka taariikhda kor.
Ku Dadaalidda Cadaaladda Jinsiyadda Arrinta #3 - Ballanqaadka Hoggaanka ee Caddaaladda Jinsiyadda
TPCH waxay ku dartay Tababarka Kormeerka Heerarka Tayada Guriyeynta Wax Kharash ah Xarunta Tababarka onlaynka ah
Ku Dadaalidda Cadaaladda Jinsiyadda Arrinta #2 - Caalamiga ah ee La Beegsado
Ku Dadaalida Cadaalada Jinsiga Arinta #1: Soo Bandhigida Cadaalada Jinsiga iyo Cunsuriyada
Qof kastaa wuu xisaabtamayaa! Tirinta Wadooyinka 2022 loo qorsheeyay Janaayo 26, 2022
Iskaa wax u qabso si aad uga caawiso dhimista guri la'aanta maanta!
Waxaan u baahanahay in ka badan 300 oo mutadawiciin ah si ay ugu faafaan degmada Pima oo dhan. Tabarucayaashu waxay booqan doonaan kaamamka ku yaal meelaha lagu dhaqo iyo saxaraha, meelaha basaska laga raaco, meelaha cuntada lagu cuno, dhismayaal cidla ah, iyo meelaha kale ee dadka aan guryaha lahayni ay hoy ka dhigi karaan subaxda Arbacada, Janaayo 26, 2022. Wax dheeri ah aqriso